Belata ibu site na iri osikapa na ọkụkọ | Nutri Nri
La osikapa nri Ọ bụ nri e mere maka ndị niile kwesịrị ịhapụ ibu na ha nwere ụma yana na-enye ha nsogbu nke ukwuu. Ọ bụ usoro dị mfe iji mezuo, ọ dabere na nri osikapa na ọkụkọ. Ọ bụrụ n ’emee ya kpam kpam, ọ ga - enyere gị aka ida kilo abụọ n’abalị asatọ.
Ọ bụrụ na ị kpebisiri ike ịme nri a, ị ga-enwe ahụike ahụike, drinkụọ mmiri dị ka o kwere mee kwa ụbọchị, rie osikapa sie na ọkụkọ eghere eghe, mee ka nri gị na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ ma jiri nnu, grated light cheese rie nri gị. na ntakịrị ego mmanụ oliv. Ikwesiri imeghari menu nke zuru ezu n'okpuru ubochi obula igha eme atụmatụ.
2 Kedu ihe kpatara nri osikapa ọkụkọ ji bụrụ ezigbo nhọrọ?
4 Kwa ụbọchị iji mee nri ahụ
5 Nwere ike iji osikapa agba aja aja?
6 Osikapa na ọkụkọ menu
7 Otu esi eme osikapa
Nri ụtụtụ: 1 iko tii, 1 obere skim yogọt, 1 ọkụ okpokoro tost na mkpụrụ 1 citrus.
Nri ehihie: osikapa na ọkụkọ na iko 1 nke bolus ma ọ bụ tii tii. Nwere ike iri osikapa na ọkụkọ ịchọrọ.
Nri: 1 iko kọfị na mmiri ara ehi, 2 ọka wit niile toasts na 2 citrus mkpụrụ ya.
Nri Anyasị: 1 iko akwukwo nri ofe, 1 nnukwu efere nke ọkụkọ osikapa na 1 iko ọcha ma ọ bụ tii tii.
Tupu ị lakpuo ụra: 1 apụl ma ọ bụ ube 1.
N’okpuru ị ga - ahụ menu ụbọchị atọ maka osikapa na ọkụkọ nri.
Kedu ihe kpatara nri osikapa ọkụkọ ji bụrụ ezigbo nhọrọ?
Osikapa na nri ọkụkọ bụ ezigbo ihe ọzọ iji sị goodbye na mmezi kilo. Ọ nwere ihe dị ọcha, nke ga-eme ka anyị dị ka ndị na-erughị ala. N'otu aka, ọ bụrụ na anyị ahọrọ osikapa agba aja aja, anyị na-eche ihu nri nwere vitamin yana mineral. N’akụkụ aka nke ọzọ, ọkụkọ bụ isi iyi nke protein mana okenye nwekwara vitamin nke otu B na A.
Ya mere, site na ijikọta ma osikapa na ọkụkọ, anyị ga-esonye ma nke ahụ carbohydrates dị ka protein, vitamin, na mineral dị mkpa. Ngwakọta dị mma iji tụlee. Mana ee, dịka ọ na-emekarị n'ụdị nri a, ọ ka mma mgbe niile ịghara ịgbatị ha ogologo oge ma jikọta ha na akwụkwọ nri na-adịghị mma.
Ibu ozu: Obi abụọ adịghị ya na osikapa bụ otu n'ime nri ndị kachasị mkpa maka ndị na-eme egwuregwu. Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa iji nweta ahụ ike na ọ bụ ya mere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke bodybuilders ji abanye na ya. Dịka eziokwu bụ isi, ọ nwere magnesium na ọ bụ otu n'ime mineral kachasị mkpa maka ndị egwuregwu. N'ihi nri a, ị nwere ike mejupụta ụlọ glycogen uru na ngwa ngwa.
Volumen: Ma ọkụkọ ma osikapa bụ ndị kasị mma Nchikota maka enweta olu. N'ihi glycemic index of osikapa, ọ dị mkpa tupu ọzụzụ. Osi osikapa ga-enye 3% fiber yana 7% protein.
Kọwaa: Ọ bụrụ na ọ na-enye ozi iji nweta olu yana akwara, osikapa na nri ọkụkọ zuru oke maka nkọwa. Na ndi na-edozi Ha bu uzo ozo di nma na nri dika nke a. Mana ọ bụ eziokwu na n'akụkụ a, ị ga - agwakọta ihe oriri na usoro dị mma iji kọwaa.
Bland nri: Mgbe anyị na-ekwu maka nri dị nro, anyị na-eme ya nke usoro nri dị mfe igwu. Ebe ọ bụ na n'ọtụtụ ikpe, anyị na-eri ha mgbe anyị nwere ụdị nsogbu nri nri. N'ụzọ dị otú a, ọ bụ ihe amamihe dị na iji osikapa esi nri na ọkụkọ, maka ụbọchị ole na ole ma ọ bụ atọ, wee jiri nwayọọ nwayọọ webata nri.
Kwa ụbọchị iji mee nri ahụ
Eziokwu bụ na ego nwere ike ịdị iche na nri dịka nke a. Karịa ihe ọ bụla n'ihi na ọ ga-adabere na mgbatị ahụ anyị nwere. Iji zere inwe obere nri n'etiti nri, anyị nwere ike ịgbakwunye ntakịrị osikapa, ebe anyị maara nke ọma na ọ na-eju afọ. Enwere ndị nwere gram 40 nke osikapa na 100 gram nke ọkụkọ ga-enwe ihe ga-ezuru ha iji tinye isi nri ọ bụla. Mana dị ka anyị na-ekwu, ịnwere ike ịbawanye ụba osikapa ntakịrị.
Nwere ike iji osikapa agba aja aja?
Eziokwu bu na odi kwa ezigbo ihe. Ebe ọ bụ na osikapa agba aja aja na-akwado ọnwụ dị arọ ma bụrụ ezigbo isi iyi nke eriri. Mana obughi nani nke a, kamakwa o nwere antioxidants, bara ọgaranya na mineral ma nyekwa anyị ike dị mkpa iji nwee ike iche ihu nri osikapa na ọkụkọ dịka nke a.
Osikapa na ọkụkọ menu
Nri ụtụtụ: Osikapa sie mmiri ma kụọ ya na mkpụrụ osisi abụọ dị ọhụrụ
Etiti ụtụtụ: yogọt eke
Nri ehihie: Brown osikapa na salad na grilled ọkụkọ ara
Nri Anyasị: Osikapa ofe na akwụkwọ nri na ọkụkọ
Nri ụtụtụ: A tii, ọka wit niile na yogọt
Etiti ụtụtụ: Mkpụrụ osisi citrus abụọ
Nri: Osikapa na ọkụkọ na akwụkwọ nri sautéed
Nri: yogọt eke
Nri Anyasị: ofe akwukwo nri na osikapa
Nri ụtụtụ: Kọfị naanị ma ọ bụ mmiri ara ehi skimmed, yogọt nkịtị na gram 30 nke achịcha ọka wit niile
Etiti ụtụtụ: mkpụrụ osisi abụọ dị ọhụrụ
Nri ehihie: Salad na mmanụ oliv, sie osikapa na milkshake na ịre anụ ọkụkọ
I nwere ike ikwugharị ụbọchị ndị a ruo mgbe izu zuru ezu. Ọ bụrụ n’agbata awa ole na ole agụụ na-agụ gị, ọ kachasị mma ịhọrọ akwụkwọ nri ma ọ bụ mkpụrụ osisi. Cheta na ikwesiri inu otutu mmiri ma inwere ike ime ya dika ogwu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmasị nri gị, họrọ ahịhịa na-esi ísì ụtọ dị ka isi mgbakwunye.
Otu esi eme osikapa
Ọ bụrụ na ị ga-esi esi esi nri osikapa agba aja aja, mgbe ahụ, a na-atụ aro ka ị hapụ ya nkeji ole na ole gara aga. Mgbe ahụ, anyị ga-esi ya ma tinye otu iko osikapa maka mmiri atọ. N'aka nke ozo, ara okuko bu anu akwadoro maka udiri nri a ebe anyi choro ifelata. Zuru oke iji soro osikapa esiri esi na nke a ghere eghe, nke anyị ga-enweta ekpomeekpo karịa. Anyị nwere ike oge ya na ngwa nri ma obu akwukwo nri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nkwere maka enyemaka » Kpofuo ibu site n'iri osikapa
Echere m na ọ bụ ezigbo nri na ị naghị agụ agụụ ...
Zaghachi na Ajacinty
nke a ọ dabara na ọrịa shuga?
Ekwesịrị m ime ya site na 4 afọ ruo 9 afọ n'ihi nsogbu ahụike. E mechakwara ya. Naanị nri m nwere ike iri bụ in ..nke ụtụtụ almọnd mmiri ara ehi, ọkụkọ eghere eghe ma ọ bụ sie osikapa n'ụtụtụ na otu maka nri abalị. Ya mere maka afọ 5. Mana ekwuola m na ọ bụ n'ihi nsogbu ahụ ike.
Ebee ka ndị na-edozi ahụ dị? Dị ka onye na-edozi ahụ anaghị amasị m nri a, ị nwere ike idalata mana m ga-atụfu ahụ ike ma nsonaazụ ga-abụ ahụ na-adịchaghị mma
Nwoke oma, iburu n'uche na okuko nwere ihe dika 20g protein na 100g nke ihe obula na osikapa aja aja dika 8g na 100g, ihe oriri 3 nwere nani 100g nke ihe obula gha enye gi 84g protein kwa ubochi. Gụ ndị nke yogọt na mmiri ara ehi, anyị na-aga ihe karịrị 100g nke protein kwa ụbọchị. Dị oke karịa ezuru ... Gịnị bụ onye na-edozi ahụ xd
Zaghachi ka halequin